Mogadishu Journal » 2016 » September » 24
//September 24, 2016
AMISOM oo loogu deeqay tobanaan bilyan oo shilin
Mjournal :–Midowga Yurub ayaa balaayiin shilinka Kenya ah ugu deeqay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga. Lacagtaa ayaa lagu bixin doonaa mushaaraadka AMISOM. Qarashkaa ayaa dhan ilaa 20 bilyan oo shilin Kenya ah. Hishiis lacagtaa deeqda ah kusaabsan ayaa Khamiistii lagu...
The European Union has agreed to disburse more than Sh20 billion to the African Union forces in Somalia following protracted negotiations on funding. The agreement signed on Thursday means the African Union Mission in Somalia soldiers would receive their allowances for the past...
Liverpool Oo Anfield Ku Xasuuqday Toban Ciyaartoy Oo Hull City Ah
Mjournal : -Liverpool ayaa halkeeda ka sii wadata guulihii xidhiidhka ahaa ee ay tartamada oo dhan ka soo gaadhay waxayna Anfield ku xasuuqday kooxda Hull City. Liverpool ayaa shaqadeeda ugu badan qabtay qaybtii hore ee kulankan iyada oo xili horeba dhibaato wayn ku abuurtay Hull...
Doorashada Soomaaliya oo mar kale waqtigeedii dib uga dhaceysa
Mjournal :–Doorashada Baarlamaanka ayey aheyd in maanta (24 September ) ka bilaabato caasimadda Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada, goobaha codbixinta iyo sanaadiiqda ayey aheyd in ay yaallaan meelaha loogu talo-galay in ay doorashada ka dhacdo, Laakin taasi ma...
Gabar 25 sano jir ah oo guddoomiye magaalo ka noqotay dalka Nigeria
Mjournal :–Gabar 25 sano jir ah ayaa loo magacaabay madaxa maamul maxali ah oo ku yaala gobol muslimiintu u badan yihiin oo ku yaala woqooyiga Nigeria. Hindatu Umar ayaa noqoneysa qofkii ugu horreeyay ee dumar ah, isla markaana ugu da’ yar oo xil ka qabta magaalada Argungu...
Dhalinyarro Soomaaliyeed oo toogasho lagu xukumay dalka Hindiya
Mjournal :–Maxkamad ku taala dalka Hindiya ayaa dil ku xukuntay 50 ruux Soomaali ah, kuwaasoo ka mid ahaa 119 qof oo horay dowladda Hindiya u sheegtay inay ahaayeen burcad badeed. Illaa afar howl gal oo ciidamada badda Hindiya ka sameeyaan Xeebaha Badweynta Hindiya ayaa...
Soomaaliya oo gadiid dagaal ka soo iibsaneysa shirka Mareykanka laga leeyahay
Mjournal :-Wasaaradda Gaashaandhigga Dalka Mareykanka, ayaa shaacisay in shirkad lagu magacaabo – Oshkosh ay gashay heshiis ay ku kacayo nus malyuun doollar, kaasoo gaadiid dagaal ay uga iibineyso Wadamada Somalia, Kamaruun iyo Ciraaq. Sidoo kale, Pentagon-ka ayaa sheegtay...
C/wali Gaas oo safiir u magacaabay Itoobiya
Mjournal : -Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa Safiir ka wakiil ah Puntland u magacaabay dalka Itoobiya, taasoo dad badan layaab ku noqotay. Warqad magacaabida oo shalay ka soo baxday Xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in Xeer Madaxweyne lagu...
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo khubad maanta ka jeedinaya shirka QM
Mjournal :–Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar ayaa maanta lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo Fadhiga Golaha guud ee loo dhaqan yahay Qaramada Midoobey oo ka socda magaalada New York ee dalka Kenya. Wasiir Hadliye ayaa jeedinaya khudbadii Madaxweyne...
Toogasho ka dhacday saacado ka hor suuq ku yaala magaalada Washington
Mjournal :—Inta la xaqiijinayo ilaa afar ruux ayaa toogasho lagu dilay suuq ganacsi oo ku yaala Burlington ee Gobolka Washington, sida booliska ay xaqiijiyeen. Wararku waxaa ay sheegayaan in toogashadan laga dhax fuliyay suuqa ganacsiga ee Cascade Mall, waxaana halkaas isku...